अमेरिका रणनीतिक रूपमा आयो, हामी जोगिऔं : राम कार्की
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेन्द्रकुमार कार्की ‘राम’ले बाहिर आएका सबै विषय सत्य नहुन सक्ने बताएका छन्। संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सबन्ध समितिको आजको बैठकमा उनले अमेरिकन सहयोग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताका बारेमा बोल्दै बाहिर आएका सबै विषय सत्य नहुने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘आएका सबै कुरा सत्य नहुन सक्छन्। केही कागजात छ भने आउनुपर्छ। हाम्रो संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ। शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, अघि बढाउ, मित्र देशहरूलाई कागज दिऔं। हाम्रो तटस्थतालाई जोगाऔं।’
कार्कीले अमेरिका रणनीतिक तयारीसहित आएकाले नेपालले तयारी नगरे भूराजनीतिक संकटबाट जोगिन नसक्ने बताए। नेपालले कूटनीतिक कौशल पनि फितलो देखाएको बताउँदै उनले अब चनाखो नभए भूराजनीतिक चपेटामा परिने बताए। ‘हामीले पत्राचार गर्‍यौं कि गरेनौं ? यो कुरा एक ठाउँमा छ। तर हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था पारदर्शी छन् कि छैनन् ? यो महत्त्वपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिले बोलेको कुराको अर्थ रहँदैन। संस्थागत रूपमा हामीले के गर्‍यौं, कति पारदर्शी भयौं ? यो संवेदनशील कुरा हो।’
सांसद कार्कीले नेपाल दक्षिण एसियाको पनि जटिल भूराजनीतिक बिन्दुमा रहेको बताउँदै अब एउटा प्रक्रिया थाल्नै पर्ने उल्लेख गरे। ‘अहिलेको दक्षिण एसियालाई आधार मान्ने हो भने हामीले एउटा प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘भारत र अमेरिका एकातिर उभिएका छन् भने चीन अर्कोतिर हुँदा दुई वटा ध्रुव बनेको छ। त्यसमा पनि चीन अगाडि छ भन्ने आंकलन छ। यस्तो अवस्थामा अब हामीले कुनै पनि ध्रुवमा जानु छैन। हामीले विशेष तयारी गर्नु जरुरी छ।’
उनले अहिलेको अवस्थामा विश्व महाशक्तिको दौडमा रहेको चीन नेपालसँग एकदमै नजिक रहेको बताए। तर अमेरिकाले भारतलाई पनि रणनीतिक रूपमा अघि बढाएकाले सोचेर कदम चाल्नुपर्ने उनले सुझाए। ‘अहिले त हामीसँग चीन पनि नजिकै छ। उता भारतलाई रणनीतिक रूपमा अमेरिकाले अगाडि बढाइरहेको छ। त्यही भएर भारत हाम्रो विषयमा अहिले खुलेर बोलिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले डिल सबैसँग गर्नै पर्छ। सम्झौता जहाँ बसेर गरे पनि हुन्छ। तर हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था अनुसार आफ्नो अस्तित्व जोगाउन बहस सुरु गरौं।’